Araka ny fanambadiana mpanolo-tsaina izay miasa amin’ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin’ny fifandraisana ny krizy, dia hanampy ny mpanjifa hamakivakiana ny maro ny antony mahatonga ny fanalan-ny fanambadiana. Na dia maro aza ny toe-javatra dia sarotra, tsy misy ny fahamarinana lalina fa mila mahafantatra ny olona rehetra. Izany dia ity: ny vehivavy dia namela ny lehilahy tia anao. Ianao dia hahatsapa mahatsiravina. Izany dia ny fo sy ny ranomaso avy aminao. Nefa afaka manao izany. Maka rehetra ny herim-po ary ny hery sy ny tahirin-mandeha. Vehivavy hamela ny olona, izay manan-janaka, ny trano sy ny fahita mahazatra ny fiainana. Ny vehivavy handeha ho antony isan-karazany, fa misy ny antony fa tonga amiko. Iray amin’ireo tiako olona mba hahatakarana azy: Izy no miasa, milalao Golf, milalao, mijery FAHITALAVITRA, mandeha manjono.
Ireo lehilahy ireo dia tsy ratsy. Misy ny olona tsara. Izy ireo dia tsara ny ray. Azonao atao ny fanohanana ny fianakaviana. Izy dia mahafinaritra sy mahatehotia. Fa hihevitra ny vadiny ho toy ny zavatra mazava ho azy.
Ny vehivavy ao amin’ny birao lazao amiko ny manaraka izao:»misy Olona afaka ny ho tonga sy mahazo ahy nandalo fotsiny mivantana eo anoloan’ny tongotra ny vady ara-bakiteny namaoka azy izy. ‘Ary indraindray, ny fahatsapana izany dia mahatonga azy ireo natahotra. Indraindray izy ireo, mitomany. Lehilahy — tsy milaza aho hoe izany no tsara na ny ratsy. Lazaiko aminareo, ny zavatra hitako. Afaka ny ho toy ny fahatezerana na fanafintohinana na tafintohina araka izay tianao. Ny vadiny dia tsy ny fananana. Tsy amidy ny fanahy. Tsy maintsy hahazoana azy. Indray andro, Fotoana izao-Fotoana. Ianao hahazo ny vehivavy iray fotsiny araka ny fisiany, ny aliveness. Fa tsy maintsy ho tsapanao. Te-hiresaka aminareo ny momba ny zavatra izay dia be atao sy te-hahatsapa fa mihaino ianao. Tsy mahalala fomba noda. Tsy amin’ny latabatra. Tena tsy ny devoly ny mpiaro ny play. Tiany ianareo mba hahatsapa azy. Tsy te-tsy hita Hifalihavanja, na haingana ny Firaisana ara-nofo. Te-hahatsapa ny fitiavany. Afaka mahatsapa ny fitiavany. Azonao atao ny mampiseho azy ireo ianao. Anao manana anao. Izany no tena tsara tarehy endri-javatra ianao. Raha toa ka efa very izany, nahoana.
Hahita azy, mahita ny fitiavany. Raha ianao no nahita ny firehetam-po na oviana na oviana ianao, dia miaina amin’ny nindramina fotoana. Raha ianao ny heviny izay, ny vadiny tanteraka ankehitriny, miezaka mba hihaino azy. Hirenireny ny eritreritrao. Ataovy azo antoka. Raha mijery izany: ohatrinona izany hitanao izany. Jereo indray, ary jereo mafy kokoa. Hihaona ny indray mipi-maso, mijanona ela kokoa noho ny mahazatra, dia ela kokoa noho izany no mahafinaritra anao. Raha toa ianao nanontany hoe: inona no ataonao, dia lazao azy:»izaho dia mitady ao anatiny. Te-hahita anao aho avy ao anatiny. Aho te hahalala hoe iza ianao. Rehefa avy ireo rehetra ireo taona, aho te hihaona aminao ny tsirairay sy ny isan andro. ‘Fa milaza izany afa-tsy raha toa midika izany, raha toa ka fantatro fa marina izany. Mikaroka ny saina tanteraka. Alohan’ny mikasika anareo, dia mahatsapa ny fihetseham-Tananao. Diniho tsara ny zava-mitranga eo amin’ny Fotoana ianao manao ny fifandraisana. Inona no miseho ao amin’ny vatana. Izay mahatsiaro ianao. Mandoa ny saina ho amin’ny kely indrindra ny fihetseham sy ny fihetseham-pony. (Izany ihany koa no indraindray dia antsoina hoe mindfulness) miaraka aminao, inona no tsapanao, amin’ny Fotoana rehetra. Fa sahirana ianao. Tsy manam-potoana. Tsy dia dimy Minitra. Dimy minitra isan-andro. Ianao no mampiasa vola amin’izao fotoana izao. Tsy niresaka aho mikasika ny hafahafa sakafo hariva na vahiny Alina (na dia ireo lehibe koa). Aho miresaka momba ny dimy minitra isan’andro ianao, dia tokony ho ny vehivavy hanokana anao hizara ny fiainana. Hisokatra — rating-maimaim-poana mba hijery sy hihaino. Ianao no manao izany. Sahiko ny miloka miaraka aminao: rehefa efa nanomboka ianao, dia ho tonga ny tsirony ary tsy te-hijanona. Rariny tsara tarehy Dyer fanambadiana mpanolotsaina sy ny fanamarinana ara-panjakana Hakomi mpitsabo, olona iray ny toro-hevitra, Eheberat, Coaching sy ny Fanofanana ho an’ny olona sy mpivady ireo olana mipoitra eo amin’ny fifandraisana, na ny aina. Ny fivoriana amin’ny alalan’ny finday, Skype maneran-tany. E-Mail mangataka ny mpanjifa vaovao fonosana. Ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany. Ny Huffington Post no adihevitra sehatra ho an’ny rehetra ny fomba fijery. Raha toa ka hanohy ny fifanakalozan-kevitra ara-politika, na ny olana ara-tsosialy te, mandefa ny hevitra any amin’ny Blaogy Ekipa. Ny tena lahatsoratra sy ny Bilaogy mba handray lahatsoratra isan’andro amin’ny alalan’ny mailaka. Ny Gazety dia mety ahitana manokana Votoaty sy ny dokam-barotra
← Rehefa Hihaona amin'ny Ray aman-dreny: Ahoana no tsy ho Ela dia Ela Loatra eo amin'ny Fifandraisana
Mampiaraka USA - Emma ny efitra hifampiresahana →